Mpanamboatra Inverters On-Grid - Ozinina & Mpamatsy Inverters On-Grid Shina
Ny inverter andiany RENAC Pro dia natao manokana ho an'ny tetikasa ara-barotra sy trano fonenana.Miaraka amin'ny endrika compact, ny inverter dia maivana sy mora apetraka.Ny fahombiazana ambony indrindra dia 98.5%.Miaraka amin'ny rafitra fanamafisam-pamokarana mandroso, ny inverter dia afaka manala ny hafanana amin'ny fomba mahomby.
RENAC R1 Macro Series dia inverter on-grid amin'ny dingana tokana miaraka amin'ny habe tsara tarehy, rindrambaiko feno ary teknolojia hardware.Ny R1 Macro Series dia manolotra fahaiza-manao avo lenta sy endrika tsy dia misy feo ary tsy misy feo.
Renac R3 Max Series 120-150 kW inverter tady andiany telo dia mampiasa endrika 10/12 MPPT mba hanomezana tetika fanamafisana mora kokoa.Ny fidirana ambony indrindra amin'ny tady tsirairay dia mahatratra 13A, izay azo ampifanarahana tsara amin'ny maody mahery vaika hampitombo ny famokarana herinaratra.
Ny fanamboarana dia azo atao mora amin'ny alàlan'ny Bluetooth.Smart IV Curve Function, Night SVG Function, manamora ny O&M.
RENAC R3 Plus Series inverter dia mety tsara ho an'ny tetikasa ara-barotra antonony sy lehibe, indrindra ho an'ny tafo ara-barotra lehibe sy ny toeram-pambolena.Mampihatra topology mandroso sy teknolojia fanaraha-maso vaovao ny isan-karazany mba hahazoana fahombiazana ambony indrindra amin'ny 99.0% ary fiverenana maharitra maharitra sy tombom-barotra ho an'ny tompona tetikasa.
Ny inverter andian-dahatsoratra R3 Pre dia natao manokana ho an'ny trano fonenana sy tetikasa ara-barotra kely.Miaraka amin'ny endrika malefaka, ny inverter R3 Pre series dia 40% maivana kokoa noho ny taranaka teo aloha.Ny fahombiazan'ny fiovam-po ambony indrindra dia mety hahatratra 98.5%.Ny fidirana ambony indrindra amin'ny tady tsirairay dia mahatratra 13A, izay azo ampifanarahana tsara amin'ny maody mahery vaika hampitombo ny famokarana herinaratra.
RENAC R3 LV Series inverter telo-dingana dia natao miaraka amin'ny fampandehanana herinaratra malefaka kely fampiasa PV ara-barotra kely.Namboarina ho safidy tsara kokoa ho an'ny tsenan'i Amerika Atsimo amin'ny inverters ambany voltase mihoatra ny 10kW, dia azo ampiharina amin'ny faritra samihafa amin'ny faritra, izay mandrakotra indrindra ny 208V, 220V ary 240V.Miaraka amin'ny inverter andian-dahatsoratra R3 LV, ny fanamafisam-peo dia azo tsotsotra fa tsy fametrahana mpanova lafo vidy izay misy fiantraikany ratsy amin'ny fahombiazan'ny fiovam-po.
RENAC R3 Note Series inverter dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra azo alaina amin'ny sehatry ny trano fonenana sy ara-barotra amin'ny alàlan'ny tanjany ara-teknika, izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo inverter mamokatra indrindra eny an-tsena.Miaraka amin'ny fahombiazan'ny (98.3%), ny fahaiza-manao oversizing sy overloading, R3 Note Series dia mampiseho fanatsarana miavaka amin'ny indostrian'ny inverter.
Renac R1 Moto andian-dahatsoratra inverters mahafeno tanteraka ny fangatahan'ny tsena modely ho an'ny dingana tokana trano fonenana, ary mety ho an'ny trano ambanivohitra sy ny tanàn-dehibe tanàn-dehibe manana tafo lehibe kokoa.Azon'izy ireo atao ny manolo ny fametrahana inverter roa na maromaro ambany herinaratra tokana.Raha miantoka ny fidiram-bolan'ny famokarana herinaratra, dia azo ahena be ny vidin'ny rafitra.
Ny inverters RENAC R1 Mini Series dia safidy tsara indrindra ho an'ny tetikasa fonenana manana hakitroky ny herin'aratra, midadasika midadasika midadasika kokoa ho an'ny fametrahana mora kokoa ary mifanentana tsara amin'ny tontonana PV mahery vaika.
Inverter Off Grid 5kw, Hybrid amin'ny Grid Inverter, Off Grid Micro Inverter, Hybrid On Grid Inverter miaraka amin'ny fitahirizana angovo, Wind Turbine Grid Tie Inverter, Hybrid Grid Tie Inverter,